Uxela njani ukuba ilaptop ineBluetooth: Zonke iindlela | Iindaba zeGajethi
Xa uthenga ilaptop, sisenokungayazi kwangoko yonke imisebenzi kunye nezinto ezinokubakho esi sixhobo. Umzekelo oqhelekileyo awazi ukuba ilaptop ineBluetooth. Iya isanda ixhaphake into yokuba iilaptops zibenalo eli nqaku. Nangona abasebenzisi abaninzi bengazi ukuba imodeli banayo ngokwenene le nto.
Ngethamsanqa, kukho iindlela ezininzi Uyakwazi ukujonga ukuba unayo ilaptop eneBluetooth. Uthotho lweendlela kwiWindows nakwiMac.Ngoko ke, nokuba ungathengisa yiphi imodeli, ungazi ngokulula ukuba unalo olu phawu okanye akunjalo.
1 Jonga ii-specs
2 Jonga ukuba ilaptop ineBluetooth kwiWindows
2.1 Umphathi wesixhobo
2.2 Isimboli yeBluetooth
3 Jonga ukuba ilaptop ineBluetooth kwiMac
3.1 I icon yeBluetooth
3.2 Malunga neMac
Inketho esebenzayo kuzo zombini iiWindows kunye neMac, Kukudibana neenkcazo zelaptop ekuthethwa ngayo. Ngokwesiqhelo, sihlala sinamaphepha ambalwa kunye neencwadana ezinelaptop, apho sinokujonga khona ukuba inolu phawu okanye hayi. Ke kuthi kulula ukujonga ngale ndlela ukuba unayo okanye awunayo iBluetooth phakathi kwezi nkcukacha.
Singaya nakwiwebhusayithi yomenzi. Into eqhelekileyo kukuba kwiwebhusayithi yohlobo lwentengiso sinezixhobo abazithengisayo, kubandakanya ke nezo sizithengileyo. Emva koko, ngumcimbi wokungena kwiprofayili kunye nokubonisana neenkcukacha zayo. Apho siya kuba nakho ukubona ukuba le laptop ineBluetooth na okanye hayi.
Kwelinye icala, sinokusebenzisa amanye amaphepha, njengalezo zevenkile ezithengisa ilaptop okanye iisayithi apho kuvavanywe isixhobo. Kolu hlobo lwamaphepha ewebhu iimpawu zabo zihlala zikhankanywa. Ke ukuba uneBluetooth, le nto iya kuhlala ikhankanywa.
Jonga ukuba ilaptop ineBluetooth kwiWindows
Ukuba unayo ilaptop yeWindows, Kukho iindlela ezimbalwa zokujonga ukuba unayo iBluetooth okanye akunjalo. Enye yeendlela ezisebenza kuzo zonke iinguqulelo zenkqubo yokusebenza, ngelixa kukho enye enabasebenzisi abanayo Windows 10 bayokwazi ukusebenzisa ngendlela elula. Ke ngekhe kubekho ngxaki malunga noku.
Indlela enokusetyenziswa kuzo zonke iinguqulelo nguMphathi weSixhobo. Kuya kufuneka siye kuyo, ukuze sikwazi ukukhangela ukuba ilaptop ekuthethwa ngayo ineBluetooth okanye akunjalo. Nangona indlela yokufika apho itshintsha ngokuxhomekeke kuguqulelo olufakileyo. Ukuba usebenzisa iWindows 8, ungasebenzisa iqhosha leWindows + X kwaye ukhethe lo mlawuli. KwiWindows 7 nakwiWindows Vista, ungachwetheza ngqo kwiinjini yokukhangela. Kwakhona Windows 10 sinokuyikhangela ngqo kwiinjini yokukhangela kwimenyu yokuqala.
Xa singaphakathi kuyo, Sifumana uluhlu lwezixhobo ezifakwe kwikhompyuter. Into ekufuneka siyenzile kukujonga iBluetooth kolu luhlu. Ukuba kuluhlu, emva koko sele siyazi ukuba ilaptop inalo msebenzi. Kungenzeka ukuba okokuqala ayibonwa. Kule meko, kuya kufuneka ufake iiadaptha zenethiwekhi kwaye wandise olo didi. Kuba kumaxesha amaninzi iyaphuma iye phaya. Kodwa, ukuba akukho nokuba mabini ala matyala anokubonwa, sele siyazi ukuba ayiphakathi kokubalulwa kwelaptop.
Kubasebenzisi abane Windows 10 ikhompyuter, Kukho indlela yesibini. Yindlela elula ngokwenene yokujonga. Into ekufuneka siyenzile kule meko kukujonga ukuba sinophawu lweBluetooth okanye i-icon kwibar yomsebenzi. Kuyimpawu eyaziwayo kuninzi, ikwakhona kwii-smartphones zethu. Umbono kukujonga ukuba ngaba ukwi-bar yomsebenzi ngamaxesha onke.
Kuya kufuneka sijonge icandelo elifanelekileyo le-taskbar, apho umhla kunye nexesha livela khona. Kukho inani leempawu, phakathi kwayo inokuba luphawu lweBluetooth. Ukuba ayibonakali krwaqu nje, sinokuklikha kwitolo ephezulu, apho ezinye ii icon zihlala ziboniswa ngokunjalo. Ke ngumcimbi wokujonga ukuba i-icon enomdla kuthi iphakathi kwabo bakweli bhokisi. Ukuba akunjalo, ngoko sele sazi ukuba asinayo le nto kwikhompyutha.
Jonga ukuba ilaptop ineBluetooth kwiMac
Ukuba kwelinye icala unelaptop yeApple, indlela yokujonga ubukho beBluetooth yahlukile. Kukho iindlela ezimbalwa zokufumanisa, ezifanayo nezo silandele kwiWindows. Ke ngoko uya kuba nakho ukuyazi ngemizuzu embalwa ngokuthuthuzeleka okupheleleyo.
I icon yeBluetooth
Siqala ngeyona ndlela icacileyo yokufumanisa ukuba iMac yakho ineBluetooth okanye hayi. Konke okufuneka ukwenze kukujonga ibar ephezulu kwiscreen, apho sinomhla kunye nexesha, kunye nothotho lweempawu. Phakathi kolu luhlu lwee icon kufuneka setha ukuba ikhona na okanye hayi iBluetooth. Into eqhelekileyo kwezi meko kukuba i-icon ilungile ecaleni kwe icon yeWiFi. Ke ukuba asiyiboni, ngekhe ibekho iBluetooth.
Kanjalo, le ndlela yokuqala ayisiyiyo kuphela ekhoyo kwi-Mac. Kwaye ayisiyiyo kuphela into ekufuneka siyenzile, kuba inokwenzeka ukuba i-icon ayibonakali, kodwa sineBluetooth ngokwenene kwi-laptop. Ukwenza oku, kuya kufuneka siye kwicandelo lolwazi malunga neelaptop, apho siza kubona ukuba inalo ngokwenene okanye hayi.
Kuya kufuneka ucofe i icon yeapile phezulu ngasekhohlo kwesikrini. Emva koko imenyu yokuma kunye neenketho ezahlukeneyo ziyavela, ekufuneka sikwenzile khetha Malunga nale Mac. Iwindow entsha iya kuvula kwiscreen, apho kuya kufuneka ucofe kwiqhosha lolwazi olungakumbi. Emva koko kuya kufuneka uye kwicandelo lezixhobo, apho siza kubona zonke iinkcukacha.
Njengakwimeko yeWindows, yonke into efakiweyo okanye ekhoyo kwiLaptop iyaboniswa. Ke ngoko, Kuya kufuneka ukhangele ukuba iBluetooth yenye yezinto onokukhetha kuzo Oko kuvela kuluhlu olukhankanyiweyo. Kwimeko apho ingaphumiyo, lo msebenzi awufumaneki kwiLaptop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukwazi njani ukuba ilaptop ineBluetooth